Baro Qaababka Aad Iskaga Reebi Kartid Wiil Ama Gabadha Ku Jecel Oo Aanad Ka Helin | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Baro Qaababka Aad Iskaga Reebi Kartid Wiil Ama Gabadha Ku Jecel Oo Aanad Ka Helin
Baro Qaababka Aad Iskaga Reebi Kartid Wiil Ama Gabadha Ku Jecel Oo Aanad Ka Helin
Bulsha:- Way adagtahay waxaad odhan lahayd wiil marku ku sheegto jaceyl oo adan wax hami ah u heynin
Waa suurta gal in wax badan kula soo gudboonato wiilal aadan ka helin oo had iyo goor ku daba orda ama ku deyn waaya hadalheynta jaceylka ay ku qabaan.
Ma fiicna inaa is qasabtid una aqbashid oo kaliya inuu ku jecelyahay. Ogow wiilasha badankood waxey iska dhaadhiciyan hadaa ka amustid inaad jaceyl u qabtid.
Waxaba ha walwalin taasi way dhacdaa had iyo goor oo bani-adan baynu nahay qof kastena kama heli karno, hadaba qodobadan akhri si aad uga badbaadid:
1-U sheeg inaadan jecleyn, waxa laga yabaa inaad ‘markaa helin’ oo kaliya u baahatid. Waxa dhacda ineysan saas kugu dhaafin maxa yeelay, raggu badankood ma fahmaan tusmada maldahan.
7-Ka dhexbax isagoo dhan, tan hadaad si wanaagsan u sameysid waad ku guuleysan karta inaa niyada ka jabisid uuna ilaawo maleynta uu qabo oo ah inaad jeceshahay. Isku day inaad isaga fiirisid adoo ku dheegagaya qof ama wax ka dambeeya. Tani waxey ka dhaadhicineysa inaadan waxaba kasoo qadin isaga oo uu kula yahay qof caadi ah oo aad inkirtay sugnaantisa.